Oovimba abagcina iincwadi zeFTSE 100 - Iphepha 5 kwayi 6
I-FTSE 100 (UKX) ikwi-Uptrend, kwinqanaba ekujoliswe kulo 6890.20
I-FTSE 100 ikwi-uptrend. Ngomhla wesi-3 kuMatshi. umzimba wekhandlela ovavanyiweyo uvavanye inqanaba lokubuyiselwa kwe-Fibonacci eyi-78.6%. Ukubuyiselwa kwakhona kubonisa ukuba i-UKX iya kunyuka iye kwinqanaba le-1.272 yokwandiswa kweFibonacci kunye nokubuyela umva. Ngo-Matshi 9, isenzo sexabiso siqinisekisile uhlalutyo lwesixhobo seFibonacci njengoko i-UKX ifikelele kwinqanaba le-1.272 yolwandiso lweFibonacci kwaye yabuya umva. Ukuqhubela phambili ukuya phezulu kunokwenzeka.
I-SMA yeentsuku ezingama-21 kunye neentsuku ezingama-50 ze-SMA zijonge phezulu zibonisa imeko. Okwangoku, isabelo sikwinqanaba lama-58 le-Index yamandla ahlobene. Ibonisa ukuba i-UKX ikummandla ophakamileyo kwaye ngaphezulu komda osembindini wama-50.
Kwitshathi yeeyure ezi-4, isabelo sikwi-uptrend. Ngo-Matshi 9 uptrend; umzimba wekhandlela ovavanywe ngokutsha uvavanye inqanaba lokubuyisa le-Fibonacci engama-61.8%. Ukubuyiselwa endaweni kubonisa ukuba isabelo siya kunyuka siye kwinqanaba le-1.618 yeFibonacci eyandisiweyo okanye inqanaba le-6890.20.
Isabelo singaphezulu kwoluhlu lwama-80% lwe-stochastic yemihla ngemihla. Ibonisa ukuba isabelo sikwi-bullish umfutho. Iintsuku ezingama-21 kunye neentsuku ezingama-50 ze-SMAs zihamba ngaphezulu zibonisa inkqubela phambili.
Isabelo se-FTSE 100 (UKX) siyanda emva kokutsala kwakhona ukusuka phezulu. Izolo, isabelo sifikelele kwinqanaba eliphezulu le-6786.80 kwaye sabuya umva. I-UKX iphinda iqale ngokutsha. Ngokwesixhobo seFibonacci, isabelo siya kunyuka siye kwinqanaba le-1.618 yeFibonacci eyandisiweyo okanye kwinqanaba le-6890.20.
I-FTSE 100 (UKX) ibuyela emva emva kokuNqatshwa ukusuka kwiNqanaba 6680
FTSE 100 NgoJanuwari nangoFebruwari, abathengi baye bachaswa njengoko bezama ukwehla ngaphezulu kwenqanaba lama-6800. Kuxhathiso ngalunye, intengiso iya kuwa kwinqanaba lama-6800. Namhlanje, i-UKX yenza intshukumo ephezulu kodwa Unokujamelana nokuchasana kwinqanaba eliphezulu.
I-SMA yeentsuku ezingama-21 kunye neentsuku ezingama-50 ze-SMA zijonge phezulu zibonisa imeko. Okwangoku, isabelo sikwinqanaba lama-52 le-Index yamandla ahlobene. Ibonisa ukuba i-UKX ikummandla ophakamileyo kwaye ngaphezulu komda osembindini wama-50.
Kwitshathi yeeyure ezi-4, isabelo senza intshukumo ephezulu. Ngomhla wesi-3 kuMatshi. umzimba wekhandlela ovavanywe ngokutsha wavavanya amanqanaba angama-78.6% eFibonacci. Ukubuyiselwa kwakhona kubonisa ukuba isabelo siya kunyuka siye kwinqanaba le-1.272 yeFibonacci eyandisiweyo. Yiyo ephezulu ye-6770.90 kwaye ibuye umva.
Isabelo singaphezulu kwe-70% yoluhlu lwe-stochastic yemihla ngemihla. Ibonisa ukuba isabelo sikwi-bullish umfutho. Nangona kunjalo, isabelo ngoku sibuyela emva. Iintsuku ezingama-21 kunye neentsuku ezingama-50 ze-SMAs zihamba ngaphezulu zibonisa inkqubela phambili.
Isabelo se-FTSE 100 (UKX) sibuyela emva kokufikelela kwinqanaba eliphezulu le-6680. Ukunyuka okuphezulu kuya kuqhubeka ngokukhawuleza xa ixabiso lifumana inkxaso. Ngokwesixhobo seFibonacci, intengiso iya kuphakama intengiso ibuye umva kwinqanaba 1.272 okanye kwinqanaba 6770.90
I-FTSE 100 (UKX) ikwiNdawo esecaleni yokuHamba, ayinakho ukuPhula iNqanaba 6800
FTSE 100 Wenza intshukumo ephezulu. Iinkunzi ziye zazama ukwaphula ukuxhathisa kwinqanaba lama-6800. Ngalo lonke ixesha i-UKX iphinda iphinda inyuke kwangoko, ixabiso liza kwehla. Ukusukela ngeyoMqungu, imarike ibikwindlela eboshwe kumanqanaba asezantsi oxhathiso.
Kwitshathi yeeyure ezi-4, isabelo senza intshukumo ephezulu. NgoFebruwari 15 uptrend; umzimba wekhandlela ovavanywe ngokutsha uvavanye inqanaba lokubuyiselwa kwe-Fibonacci engama-38.2%. Ukubuyiselwa kwakhona kubonisa ukuba isabelo siya kunyuka siye kwinqanaba le-2.618 yeFibonacci eyandisiweyo. Kukuphakama okungama-7290.30.
Isabelo singaphezulu kwoluhlu lwama-40% lwe-stochastic yemihla ngemihla. Ibonisa ukuba isabelo sikwi-bullish umfutho. Iintsuku ezingama-21 kunye neentsuku ezingama-50 ze-SMAs zihamba ngaphezulu zibonisa inkqubela phambili.
Isabelo se-FTSE 100 (UKX) senza intshukumo ephezulu. I-uptrend ijongene nokuchasana kwinqanaba lama-6800. Ukuqhekeka kuya kuqhubela phambili isabelo ukuba sinyuke. Ukuhamba ecaleni kungaqhubeka ukuba iinkunzi zeenkomo ziyasilela ukwaphula umphambili wamva nje.
UK100 isuswe kwiPivot yeNyanga
Inkxaso ephambili: 6560 - 6495
Ukuchasana okuphambili: 6710 - 6800 - 6900
I-FTSE ivule kwaye yadipha ukuze iphinde ibuyele kwinqanaba eliphambili, ipivot yanyanga zonke kunye nolwakhiwo olushukumisayo. Oku kwala kungundoqo kwingcamango yethu ende.
Inqanaba eliphambili elidlulileyo elijikeleze i-6570 yayilelinqanaba lokufaka icala kwi-FTSE yenxalenye engcono kaFebruwari kanye ngaphambi kokuba abathengi bathathe amaxabiso kwi-3.4% ye-bullish.
Ixabiso libuyise umva nge-61.8% yelo nyathelo lokunyusa kwaye liyalile indawo kasodolophu yokuhlangana ngaphakathi kolwakhiwo lwangoku. Amathuba okuqhubekeka okuqhubayo aphezulu ukuba amaxabiso aqhekekile kunye nomzekelo oguqulweyo (wedge) kwaye ugcina urhwebo ngaphezulu kwendawo yethu.
Olu lurhwebo lwexesha elide.
I-FTSE ibuyela kwindawo yethu yokuthenga
Inkxaso ephambili: 6585 - 6500
Ukuchasana okubalulekileyo: 6715 - 6950
Emva kweentsuku ezingama-95 zokurhweba ngaphakathi kuluhlu lwe-choppy kakhulu i-FTSE yaphule ulwesiHlanu wokugqibela ngeflegi yexesha eliphakathi. Khange sikwazi ukubamba impembelelo yokuqala okoko kuqhawuke ngoLwesihlanu.
NgeCawa i-FTSE ivule ngaphezulu kwaye ayizange iphinde ibuyele kwindawo yethu yokuthenga, kude kube namhlanje.
Uhlalutyo lwe-2H kunye nokuseta
I-FTSE ibuyile yaya kwi-2 yeeveki eziphakamileyo eziphakamileyo kanye kwi-pivot yeveki ngokudibana nepesenti yokurhola yonke i-rally kaFebruwari.
Kudala silindile kule veki ukuze siphinde sibuyele kwiindawo eziphakamileyo ezaphukileyo ngelixa sifumanisa ukungafani okukhulu okufihliweyo kumaxesha aphezulu.
Oku kulula kakhulu xa kuthengwa kwindawo efanelekileyo.
For️ Kwintsalela yolu hlalutyo kunye nomqondiso wokubeka olu rhwebo, nceda ujoyine iqela lethu le-VIP apha https://learn2.trade/go-premium ⚠️
I-FTSE 100 (UKX) iwa emva kokuchaswa kwinqanaba le-6800
FTSE 100 uye waqhubeka nokuhla ezantsi. Isabelo sichasene kwinqanaba lama-6800 njengoko amaxabiso aqala kwakhona ukwehla. Ukuhamba okuya ezantsi kuya kukhawuleziswa ukuba amaxabiso ehla ngaphantsi kwenqanaba lama-6600 okanye ii-SMAs. Ukunyuka okuphezulu kuya kuqhubeka kwakhona ukuba ixabiso lifumana inkxaso ngaphezulu kwenqanaba lama-6600.
I-SMA yeentsuku ezingama-21 kunye nee-SMA zeentsuku ezingama-50 zithambekele phezulu zibonisa imeko yangaphambili. Okwangoku, isabelo sikwinqanaba lama-59 lesalathiso samandla ahlobene. Ibonisa ukuba i-UKX ikummandla ophakamileyo kwaye ngaphezulu komda osembindini wama-50.
Kwitshathi yeeyure ezi-4, isabelo kukuhla okuye ezantsi. Ngomhla ka-16 kuFebruwari wedowntrend, umzimba wekhandlela owabuyisa umva wavavanya inqanaba lokubuyisela kwakhona i-Fibonacci engama-50%. Ukubuyiselwa kwakhona kubonisa ukuba isabelo siza kuwela kwinqanaba le-2.0 Fibonacci extensions. Lizantsi lama-6677.50.
Isabelo singaphantsi kwe-40% yoluhlu lwe-stochastic yemihla ngemihla. Ibonisa ukuba isabelo sikwimeko ye-bearish. Iintsuku ezingama-21 kunye neentsuku ezingama-50 ze-SMAs zihlehla ezantsi zibonisa ukwehla.
Isabelo se-FTSE 100 (UKX) sisezantsi. Imivalo yamaxabiso ingaphezulu kwee-SMA ezibonisa ukuba isabelo sinokunyuka emva kokubuyiswa kwakhona. Nangona kunjalo, uxinzelelo lokuthengisa luya kubhengezwa kakuhle ukuba amaxabiso aphula ngezantsi kwe-SMAs.
Unokuthenga iingqekembe ze-crypto apha: Thenga iiMali
I-FTSE 100 (UKX) ifikelela kwi-Bearish Exhaustion, ngoMeyi ibuyela kwinqanaba le-6259.30
Ukuhlaziywa: 7 Februwari 2021
FTSE 100 uye waqhubeka nokuhla ezantsi. Nge-29 kaJanuwari ezantsi; umzimba wekhandlela ovavanyiweyo uvavanye inqanaba lokubuyiselwa kwe-Fibonacci eyi-78.6%. Inqanaba lokubuyisa libonisa ukuba isabelo sinokuwela kwinqanaba le-1.272 yokwandiswa kweFibonacci kunye nokubuyela umva. Ezantsi ngama-6259.30.
I-SMA yeentsuku ezingama-21 kunye neentsuku ezingama-50 ze-SMA zihle ziye phezulu zibonisa imeko yangaphambili. Okwangoku, isabelo sikwinqanaba lama-42 le-Index yamandla ahlobene. Ibonisa ukuba i-UKX ikummandla we-downtrend kwaye iyakwazi ukuwa.
Kwitshathi yeeyure ezi-4, isabelo kukuhla okuye ezantsi. Ngomhla wama-28 kuJanuwari ukwehla, umzimba wekhandlela obuyise umva kuvavanywa inqanaba lokubuyiselwa kwakhona kwe-Fibonacci eyi-78.6%. Ukubuyiselwa kwakhona kubonisa ukuba isabelo siya kuwela kwinqanaba le-1.272 Fibonacci extensions. Leliphantsi elingu-6260.10.
Isabelo singaphantsi kwe-60% yoluhlu lwe-stochastic yemihla ngemihla. Ibonisa ukuba isabelo sikwimeko ye-bearish. Iintsuku ezingama-21 kunye neentsuku ezingama-50 ze-SMAs zihlehla ezantsi zibonisa ukwehla.
Isabelo se-FTSE 100 (UKX) sisezantsi. Isabelo sifikelele kwi-bearish ukudinwa. Ixabiso linokubuyela umva kwinqanaba le-6260.10.
I-footsie iyala inqanaba elikhulu.
I-FTSE ibuyise umva nge-50% ukusuka kumlenze wokugqibela ukuya kubuyisa ukuphakama okuphezulu kunye nenqanaba lama-6600 elahliweyo.
Sisathengisa ngaphakathi kulwakhiwo olukhawulezileyo lwe-bearish kodwa ukungafani okufumanisayo kufumanise amanqaku kuxinzelelo lokuthengisa loma.
Inqanaba lokuqinisekisa: 6699
Inqanaba lokungasasebenzi: 6600
I-FTSE100 (UKX) ibuyela emva kokuNqatshwa ukusuka kwiNqanaba 6800
FTSE 100 ibuyela emva emva kokwaliwa kwindawo ephezulu yakutshanje. Amaxabiso aqhekekile ngezantsi kwenqanaba lama-6800 kunye nokuwa. Emva kokuphinda ubuye kwinqanaba lama-6800 phezulu, ukuhla okuthe gca kuyaqala kwakhona. Ukuhla ezantsi kunokwenzeka ukuba kuqhubeke njengoko bekukhatywa kwinqanaba lama-6800.
I-SMA yeentsuku ezingama-21 kunye neentsuku ezingama-50 ze-SMA zihle ziye phezulu zibonisa imeko yangaphambili. Okwangoku, isabelo sikwinqanaba lama-54 le-Index yamandla ahlobene. Ibonisa ukuba i-UKX ikwindawo ye-uptrend kwaye iyakwazi ukuphinda iqhubeke nentshukumo ephezulu.
Kwitshathi yeeyure ezi-4, isabelo kukuhla okuye ezantsi. Ngomhla we-15 kuJanuwari wehla, umzimba wekhandlela obuyise umva kuvavanywa inqanaba lokuphinda kubuyiswe i-Fibonacci. Ukubuyiselwa kwakhona kubonisa ukuba isabelo siya kuwela kwinqanaba le-61.8 yeFibonacci eyandisiweyo. Oko kukuthi, isabelo siya kufinyelela kwinqanaba le-1.618.
Itshathi ye-UKX-1 yeyure
Isabelo singaphezulu kwama-30% kuluhlu lwe-stochastic yemihla ngemihla. Ibonisa ukuba ikwi-bullish umfutho. Iintsuku ezingama-21 kunye neentsuku ezingama-50 ze-SMAs zihlehla phezulu zibonisa uptrend.
Isabelo se-FTSE 100 (UKX) siyawa. Ngokuya kuhlalutyo lwezixhobo zeFibonacci, isabelo siya kuwela kwinqanaba le-1.618 yeFibonacci eyandisiweyo okanye ezantsi ezingama-6549.0.
← Entsha izithuba 1 ... 4 5 6 abaDala izithuba →